Sarimihetsika tsy fahita firy miaraka amin’ny feon’i Kyoto, Japana, tamin’ny taona 1929 · Global Voices teny Malagasy
Sarimihetsika tsy fahita firy miaraka amin'ny feon'i Kyoto, Japana, tamin'ny taona 1929
Voadika ny 24 Janoary 2019 13:45 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, नेपाली, Français, Ελληνικά, Nederlands, Italiano, 日本語, polski, 繁體中文, বাংলা, Português, Română , English
Kyoto, Japana, tamin'ny taona 1929. Pikantsary avy amin'ny “1929 – Feon-dahatsary Tranainy tao Kyoto, Japana”, nasiam-panitsiana sy navoakan'i Guy Jones tao amin'ny YouTube.
Namerina nandefa indray ny lahatsarim-baovao momba ny sarimihetsika tao Kyoto tamin'ny taona 1929 ny fantsona Youtube malaza . Ny antony nahatonga an'ity sarimihetsika ity ho nisongadina dia ny nahitana ilay lahatsary niaraka tamin'ny feo mampiseho ny fiainana Japoney an-tanandehibe tamin'izany fotoana izany. Amin'ny ankapobeny anefa mangina ny vaovaon-tsarimihetsika tamin'io vanim-potoana io.
Ahitana seho an-tsena, lanonana ao amin'ny toerana masina Shinto sy ireo zatovovavy manao kilalao nentim-paharazana ilay vaovaon-tsarimihetsika ary izay rehetra izany dia miaraka amin'ny feo mazava tsara.
Iray amin'ireo vaovaon-tsarimihetsika am-polony izay naverina nalefa indray ary navoakan'i Guy Jones, mpaka lahatsary ao amin'ny YouTube ity horonantsary ity, izay nanitsy ireo sarimihetsika tranainy tamin'ny taonjato lasa mba hifanaraka kokoa amin'ny fenitra an-tsarimihetsika ankehitriny.
Amin'ny ankapobeny dia nahenan'i Jones ny hafainganam-pandehan'ny sarimihetsika ôrizinaly ary nampiany feo mifanaraka amin'ny ambiansin'ny fiainana andavanandro hita eny an-dàlamben'ny tanandehibe, toy ny famerenana indray ilay lahatsarin'ny vaovaon-tsarimihetsik'i Tokyo tany amin'ny zato taona lasa .
Amin'ity tranga ity, ny fakantsary Movietone no nangalana ny feo mahavariana tamin'io vanim-potoana io, izay teknolojia nampiasaina tany amin'ny taona 1929. Ny rafi-peo Movietone dia fomba fandraketa-peon'ny lahatsary ho an'ny sary mihetsika izay natao mifanaraka ny feo sy ny sary.
Avy ao amin'ny Moving Image Research Collections ao amin'ny Oniversiten'i Caroline Atsimo (MIRC), mpikarakara ny Fox Movietone News Collection ity lahatsary ity.
Fanamarihana: Nohavaozina ity lahatsoratra ity mba hanasongadinana fa ny MIRC no loharano nangalana ny vaovaon-tsarimihetsika, ary isaorana i Dan Streible .